Umkhiqizi Womshini Wama China | IMiniXin Brush Imishini
Gxila kumshini we-Brashi We-High Speed ​​Brush osukelwe kusukela ngo-2003.
Uyasethemba, Meixin uchwepheshe womshini wokukhiqiza umshini we-Brush.
I-3 Axis Hockey Brush Ukwenza Umshini
Ukulungiswa kwe-FMX kuvumela ukuguqulwa okusheshayo kokukhiqiza okusha kwebrashi.
4 Umshini wokuhlanza i-Axis Toilet Brush
Njengoba sinamakhanda owodwa wokuthambisa, ukunyakaza okune-4 eksisi, isetshenziselwe ibhulashi lendlu yangasese encane, abanye.
2 Umshini wokuhlanza i-Axis Broom
Amabhulashi Wezingubo Anamakhanda owodwa wokuthambisa, ukunyakaza okune-axis okukodwa, bekusetshenziselwa imishini YAMANYE amabhulashi asefulethini.
I-5 Axis ne-1 Tufting Brush Machine
I-axis enhle kakhulu ye-5 eksisi 3 amakhanda ama-2 wokushayela kanye nomshini wokuxubha ongu-1tufting we-brush yangasese.
Insizakalo yokwenza ngokwezifiso yezidingo zebhizinisi ezihlukile noma eziyinselele.
Sizokwenza ngokwamasampula amakhasimende ethu ukuklama umshini .Sizokwenza osayizi abahlukahlukene bemishanelo. Usayizi ojwayelekile womshanelo: 400 * 60mm. Uma ufuna ukwenza usayizi omkhulu kakhulu noma imishanelo ethile ekhethekile, singathanda ukuyenza.
Ikakhulu, ngebhulashi le-roller
& umshini wokuxubha i-disc, lolu hlobo lwebhulashi livame ukusetshenziswa kwezimboni ngemishini yosayizi wokuhluka. leso ngesinye sezizathu esidinga ukwenziwa ngokwezifiso.
1. Uphenyo: Amakhasimende atshela izidingo ezifunwayo nezokuhambisana.
2. Idizayini: Ithimba lokuklama libandakanyeka kusukela ekuqaleni kwephrojekthi ukuqinisekisa imikhiqizo emihle eyenziwe ngokwezifiso evumelana nezidingo zamakhasimende.
3. Ukulawulwa Kwekhwalithi: Ukuze sinikeze imikhiqizo esezingeni eliphezulu, sigcina isebenza ngempumelelo.
4. Ukukhiqizwa KweMisa: Lapho ama-prototypes esegunyazwe umklamo ngokuya ngefomu, umsebenzi, nokufunwa, ukukhiqizwa kuyisigaba esilandelayo.
5. Singakwazi ukuhlela ukuthuthwa kwama-oda - kungakhathalekile ngezinsizakalo zethu zakwamanye amazwe, abanye abahlinzeki noma inhlanganisela yakho yomibili.
Umshini Wokhuni i-Flat ibhulashi eyenziwe yi-MEIXIN i-PZ-18
Isisekelo sokhuni, Ubuso obunye, Ngokuya ngezidingo zamakhasimende I-Filament ngaphandle kwezimbobo.
India phool jhadu umshanelo wokwenza umshini - CNC awukho umshanelo othulini UKWENZA IMishini
Ifektri yethu ye-JIANGMEN MeIXIN COMB BRUSH MachINERY CO., I-Limited esebenza nge-broom kanye ne-brashi. Singumkhiqizi wezobuchwepheshe obuphakeme futhi sinolwazi oluphambili kulayini osuvele une-30years. Ungafinyelela igama lomkhiqizo wethu. Njengomshini wothuli. Okuzenzakalelayo Awukho Umshini Womshini Wokwenza Umshini. I-India Phool Jhadu Broom Ukwenza Umshini Ogcwele. India phool jhadu umshanelo wokwenza umshini - CNC awukho umshanelo othulini UKWENZA IMishini.
Umshini wensimbi yensimbi ye-Flat brashi eyenziwe yi-MEIXIN i-PZ-03
Ukulungiswa kwe-FMX kuvumela ukuguqulwa okusheshayo kokukhiqizwa okusha kwe-brashi. Lo msindo ophansi 3 axis cnc umshini we-FAN BROOM wokwenza ibhulashi nge-2 grippers.
Umshini wokuxubha i-roller owenziwe yi-MEIXIN wenza i-PZ-02
Ifektri yethu ikhethekile ekukhiqizeni umshini wokuxubha i-axis owodwa kuya kwese-5, umshini wokufundisa umbala we-CNC, umshini wokushayela we-CNC, umshini wokudonsa we-CNC kanye nomshini wokuhlanganisa, imishini yokusika i-filament, imishini yokusika umshini.Imikhiqizo yethu ikakhulukazi isetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo zamabhulashi, ukwenza isibonelo: umshanelo (ipulasitiki nezinkuni) yokuhlanza ibhulashi, isixubho segesi kagesi, isixubho sokuhamba, ibhulashi lokuhlobisa, ibhulashi lephepha lesipikili, ibhulashi le-roller yomkhakha, ibhulashi lomshini, ibhulashi le-round disc, ibhulashi lokuwasha izitsha, ikamu, ibhulashi lokhuni nokunye.
Siwine izitifiketi eziningi zomkhiqizo wethu ngokuya ngekhwalithi
I-JIANGMEN MeIXIN COMB BrusH YENZA UMQINISO WEMALINA, Kusukela ngo-2003, inkampani yethu ikhiqiza imishini yasendlini eyi-2-5axis kanye namabhulashi wezezimboni nemishini yomshanelo, imishini yokusika kanye yokuhlaba umkhosi, umshini wokusika we-pneumatic. Isetshenziselwa ukukhiqiza izinhlobo eziningi zamabhulashi wasendlini. Njengokuthi, amabhulashi asendlini yangasese, imishanelo, i-hockey brashi, ibhulashi lezinwele, ibhulashi lebhodlela noma yiluphi uhlobo lamabhulashi. Okwamabhulashi asezimboni afana nalawa: Roller shayela, ibhulashi yediski yomgwaqo, nolunye uhlobo lwamabhulashi.
Eminyakeni embalwa edlule, ukubaluleka kwethu kweNombolo 1 bekulokhu kuyinkonzo yamakhasimende nokwaneliseka kwamakhasimende. Senze okuningi ukukhulisa amazinga wekhwalithi futhi silwela ukusungula uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi yomsindo nohlelo lokuqinisekisa. Ngaphezu kwalokho, inkampani yethu ithole umkhiqizo wokugunyazwa kobunikazi kanye nesitifiketi se-EC.